Jose Mourinho oo digniin u diray kooxaha kula tartamaa horyaalka iyo Wiilashiisa oo dubtay kooxda Man City
Home Horyaalka Ingiriiska Jose Mourinho oo digniin u diray kooxaha kula tartamaa horyaalka iyo Wiilashiisa...
Jose Mourinho ayaa daawaday Tottenham oo soo saaraysa mid ka mid ah qaab ciyaareed sumcadeed si uu u xaqiijiyo guushii 2-0 ee ay ku gaareen Manchester City isla markaana uu farriin u diro tartanka horyaalka Premier League.
Goolal weerar celis ah ay kala dhaliyeen Son Heung-min iyo Giovani Lo Celso oo bedel ku soo galay ayaa Spurs u horseeday guul muhiim ah inkastoo wiilasha Pep Guardiola kooxdiisa ay soo bandhigtay qaab ciyaareed wanaagsan.
Tababaraha City ayaa saxiixay qandaraas kordhin usbuucaan, laakiin ma uusan awoodin inuu seddex dhibcood ku hogaamiyo ka dib markii kooxdiisa ay ku guuldareysatay inay kala jabiso kooxda martida loo ahaa ee Tottenham.
Previous articleMan United oo dooneysa in ay dib ugu soo celisa Eriksen horyaalka Premier League iyo dhowr koox oo kula tartamaa.
Next articleAtletico Madrid oo guul kale ka gaartay kooxda Barcelona